क्रोसियाको अर्को अनिदो रात, विश्व कप देखि नेशन्स लिगसम्म इंगलैंडको बदला र रेलिगेसनमा स्पेनको साथ!! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
क्रोसियाको अर्को अनिदो रात, विश्व कप देखि नेशन्स लिगसम्म इंगलैंडको बदला र रेलिगेसनमा स्पेनको साथ!!
प्रकाशित मिति : आइतवार, मंसिर २, २०७५
इंगलैंडले नेशन्स लिगमा अर्को नया इतिहासको मार्ग कोर्दै क्रोसिया माथि रसिया देखिको बदला पुरा गर्दै रेलिगेसन देखि सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको छ। निकै ठुलो र महत्वपूर्ण खेल थियो इंगलैंड विरुद्ध क्रोसियाको खेल। आफ्नै घरेलु मैदान वेम्ब्लीमा भएको उक्त खेलमा निकै कस्टको साथ उत्रिएका थिए दुवै टिमका खेलाडी। क्रोसिया र इंगलैंडका निम्ति ड्र रेलिगेसनको झन्डा थियो भने स्पेनका निम्ति प्रवेशको चाबी।
ग्रुप चरणको अन्तिम खेल लिग-ए ग्रुप ४ का निम्ति सेमी फाइनल को प्रवेश गर्ने र को बाहिरिने भन्ने नतिजा कै निम्ति यो खेल निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो। ग्रुप चरणबाट साबिक बिजेता आखिर इंगलैंड बन्यो। इंगलैंड ४ खेल खेल्दै ७ अंक बटुल्यो भने क्रोसियाले मात्रै ४ अंक जोड्न सफल भयो।
अंक तालिकामा अग्र रहेको स्पेन भने २ जित २ हार खेल्दै सेमी फाइनल प्रवेश गर्न सफल भएन। साथै इंगलैंड १ हार १ ड्र र २ जित संगै सेमी फाइनल प्रवेश गर्यो। आजको खेल ड्रमा सकिएको खण्डमा समेत क्रोसिया र स्पेन बाहिरिने थियो।
आजको खेलमा क्रोसियाका क्रामेरीचले खेलको पहिलो गोल गरेका थिए। अग्रता लिएको क्रोसियाले पहिलो गोललाई बढाउन सकेन साथै इंगलैंडलाई रोक्न, यस्तैमा खेलको ७८ औ मिनेटमा गोमेजको लामो थ्रो बलमा लिंगार्डको मद्दतमा क्रोसिया बराबरीमा पुग्यो भने खेलको अन्तिम ८५ औ मिनेटमा गोलको खाता खोल्दै ह्यारी केनले इंगलैंडका निंति अर्को गोल गरे फलत क्रोसिया २-१ले पछी पर्यो र नेशन्स लिगबाट बिदा भयो।
रसियन विश्वकप २०१८मा अन्तिम घडीमा क्रोसियाले गोल गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको थियो भने आज उक्त खेलको बदला इंगलैंडले लियो। प्रिमिएर लिग जस्तो निकै अट्याक खेल खेल्ने र खेलाउने इंगलैंडका निम्ति यो कम ब्याक निकै ठुलो थियो। साथै वेम्ब्लीमा इंगलैंडका समर्थकको समर्थनले इंगलैंड टिमलाई अझै स्फूर्ति दिलाएको थियो।
क्रोसियामा निकै राम्रो डिफेन्सिभ खेल देख्न सकिन्छ, साथै विश्व उत्कृस्ट डिफेन्डर डेजान लोब्रेन क्रोसियन हुन् साथै भिडा जो विश्वकपमा समेत निकै चम्किएका थिए।
क्रोसियाबाट युबेन्ट्सका स्ट्राइकर एबं क्रोसियाका गोलकर्ता मारिओ मान्जुकिच साथै विश्वकप २०१८ मा अप्रत्यासित गोल रोक्न सफल सुबासिच साथै बार्सिलोनाका साथै क्रोसियन प्ले मेकर इभान राकिटिकको उपस्थिति थिएन। मान्जुकिच र सुबासिचले भने आफ्नो देशबाट फुटबल खेलबाट सन्यास लिई सकेका छन्। साथै खेलको पहिलो हाफ मै क्रोसियाका साल्कोले मैदान छाडे।
निकै कम अट्याक खेल भएको क्रोसिया अन्तत स्पेन र इंगलैंड दुवै संग १ १ खेल हार्न पुग्यो। खेलमा इंगलैंड गोल गर्न धेरै ठाउँमा चुक्यो साथै क्रोसिया पनि तर इंगलैंडको अट्याक निकै बेजोड थियो। क्रोसियाले पहिलो हाफमा निकै फितलो पदर्शन गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा निकै प्रयासहरु जुटायो।
क्रोसियाका लुका मोद्रिच उक्त खेलमा समेत राम्रो पदर्शन गरेको भेटियो, उनि क्रोसियाका निमित एक अबल प्ले मेकरको रुपमा स्थापना छन् उनलाई विश्वकप देखि हालसम्म हर राष्ट्रिय खेलमा खेल सिर्जना गर्ने खेलाडीको रुपमा परिचित छन्। विश्वकपमा भएको पूर्ण ११ दुवै टिममा थिएन ता पनि क्रोसियाको हारले विश्वकपमा उजाड दोस्रो बनेको स्मृतिलाई भने अर्को नयाँ इतिहास दिलाउन सकेन।
—–हर फुटबल समाचारका निम्ति हामीसंगै रहनुहोला जेस्ट मिडिया
CroatiaenglandUEFA National League